Linn Ko: Solve Huawei Phone Step2Error
Huawei ဖုန်းတွေ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် Firmware တင်ရင် Step2မှာ Fail ဖြစ်တာက ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တော့ ကျွန်တော်အတိအကျမသိပါဘူး
ကျွန်တော်က Developer လည်းမဟုတ်သလို ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှလေ့လာနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့
Step2Fail ပြရင် ကျွန်တော်ရှင်းနေကြ နည်းလမ်း
လေးတွေကို သူငယ်ချင်းများသိစေလိုသော သဘောနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
3.နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ Huawei Flashing Tool လေးကို အသုံးပြုပြီးတင်ကြည့်ပါ။ တစ်ချို့လည်း အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။
4.နောက်တစ်ခုက Clockworkmod Recovery(CWM) တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ အဲ့
CWM တွေကို Stock Recovery ပြန်သွင်းပေးရပါတယ်။
OK အဲ့ဒါဆို Stock Recovery ပြန်သွင်းမယ် But Backup မလုပ်မိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
တစ်ချို့ Firmware တွေက ဥပမာ C8600 ဆိုရင် updata.app ခွဲလိုက်ရင် recovery.img ဖိုင် တစ်ပါတည်းပါလာပါတယ်။အောက်မှာကြည့်ပါ။
Stock Recovery သွင်းပီးရင်တော့ အထက်ပါ Step2Error ပျောက်ပီပေါ့ ထင်တာပြောတာနော် Developer မဟုတ်ဘူးလေ...
အပေါ်က ခွဲထုတ်တဲ့နည်းအတိုင်း အကုန်လုံး မရပါဘူး။ တစ်ချို့ဟာတွေဆိုအဲ့ လို Coding တွေ လုံးဝမပါပါဘူး။ အဲ့ဒါမျိုးဆို Android Kitchen နဲ့ခွဲရတယ်လို့ ဆရာသမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေတုန်းပါ မသုံးတတ်သေးပါဘူး။
5.နောက်တစ်နည်း အဲ့ဒီကောင်ကတော့ Firmware ပျက်သွားတယ် ပီးတော့ Recovery ခေါ်မရတော့ဘူး။ Firmware ပြန်တင်တယ် Step2Fail ဖြစ်တယ် ။ SD ချိန်းတယ် မကောင်းဘူး ? CWN တင်တယ် မ၀င်ဘူး? အဲ့ဒါမျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ? အဲ့ဒါတွေက ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲ ? Bootloader Unlock လုပ်ကတဲ့ကောင်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။
List of Booloader Unlock
ထူးချွန်တဲ့သူ ၊ Developer ၊ မဟုတ်တဲ့အတွက် အကုန်လုံး နားမလည် မရှင်းပြနိုင်တာပါရင် ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင် နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်
Myanmarmobileapp.com မှ ကူးယူ တင်ပြပါသည်.....
Posted by Linn Ko at 1:13 PM